>Saung Yun La – Twisted Winter | MoeMaKa Burmese News & Media
>Saung Yun La – Twisted Winter
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၁
ခေါင်းစဉ်ပျောက်ပြီး အကြောင်းအရာပျက်နေခဲ့ရတယ်…. ။
တရွက်ချင်းဆွဲထုတ်လှန်လှောပြီး ဖတ်နေခဲ့ရတယ်…. ။
မြူနဲ့နှင်းမရှိတဲ့နွေလိုလည်း ရုတ်တရက်ပူနေခဲ့တယ်…. ။
လူတအုပ်နဲ့ ချွတ်စွပ်တူလာခဲ့တယ်… ။
ဟန်ဆောင်ရုပ်ဖျက် သစ္စာနဲ့ကတိပျက်နေခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ….. ။
(Photo – http://www.cepolina.com/photo/snow_tree_leaf_dry_winter.htm)
>Daw Suu optimistic on recent unfortunate incident towards national reconciliation
>21st DEC 2009 - Burmese Journal Digest Headlines